रोय गालन: को हो र यस पुस्तकका लेखकले के लेखेका छन् वर्तमान साहित्य
फोटो स्रोत रोय गैलन: एले
यदि त्यहाँ एक जना प्रख्यात लेखक छ भने, यो पक्कै रोय ग्यालेन हो। यो लेखक, स्तम्भकार, प्रभावकार र नारीवादी प्रवृत्ति मा धेरै हो। तपाईं उसलाई चिन्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि तपाईंले उसको बारेमा केहि पढ्नुभएको छ वा सोशल मीडिया वा टेलिभिजनमा केहि देख्नुभएको छ।
तर यो केस हुन सक्छ कि तपाईं उसलाई चिन्नुहुन्न, र यसको लागि हामी तपाईंलाई पुन: गणना गर्न कोशिस गर्नेछौं रोय ग्यालन को हो, उनी कसरी लेख्छन् र कुन पुस्तकहरू उनले लेखेका छन्। के हामी सुरु गर्छौं?
1 को रॉय गैलन छ
1.1 तपाईंको कामको सुरूवात
1.2 रोइ गैलन एक नारीवादीको रूपमा
2 रोय गैलनका पुस्तकहरू
को रॉय गैलन छ
रोय गालनको बारेमा तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको वास्तविकतामा उहाँ उसको वास्तविक नाम हुनुहुन्न। को यस लेखकको पूरा नाम रोय फर्नांडीज गालान हो। जे होस्, उसले दोस्रोलाई प्राथमिकता दिनको लागि आफ्नो पहिलो थर दिए। यस प्रकार, यो त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको थियो।
उनको जन्म डिसेम्बर २२, १ 22 .० मा स्यान्टियागो डि कम्पोस्टेलामा भएको थियो तर ग्यालिसियामा जन्मेको बावजुद सत्य यो हो कि उनका बाल्यकालको अधिकांश भाग त्यहाँ थिएन, तर क्यानरी टापुहरूमा। साथै, उनको परिवार वास्तवमै तपाईंको विशिष्ट परिवार हैन; उनी समलि .्गी परिवारबाट आउँछिन् र चाँडै नै उनको एउटी आमा सोलको गुमाइन जुन उनको १ 1980 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। तसर्थ, उहाँ केवल आफ्नो अन्य आमा रोजा संग रहनुभयो।
साथै, तपाईंलाई यस लेखकको बारेमा थाहा हुनुपर्दछ कि उहाँकी जुम्ल्याहा बहिनी, नोआ ग्यालेन छन्।
शैक्षिक स्तरमा, रोय गालनले ला लागुना विश्वविद्यालयमा कानूनको अध्ययन गरे र २०० 2003 मा स्नातक गरे। ११ बर्षसम्म उनले म्याड्रिड सरकारको प्रशासनमा काम गरे तर २०१ 11 मा लेखन बगले उनीमाथि असर पारेको थियो र उसले आफूलाई यो पेशामा पूर्ण रूपमा समर्पण गर्न थाल्यो।
थप रूपमा, २०१ 2017 मा उनी पोडेमोसको सिटिभन असेंबलीको ईगो एर्रेजनको सूचीमा थिए र २०१ 2019 मा मोरे म्याड्रिडको सूचीमा मानुएला कार्मेनाको साथ म्याड्रिड सिटी काउन्सिलको सूची थियो।
तपाईंको कामको सुरूवात
रोय गालन पुस्तकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने मानिस होइनन्। यसका धेरै पक्षहरू छन्। र मुख्य एक लेखक को हो। यो उपन्यास, कविता, छोटो कथा, पटकथा, सिनेमाटोग्राफिक विश्लेषण ... साथै साहित्यिक रचना, अभिव्यक्ति संसाधनको लिबरेशन वा लेखकको Vademecum मा पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम मा क्यानेरियन स्कूल अफ लिटरेरी सृष्टि मा एक विद्यार्थी थियो कि ज्ञात छ। ।
ऊ स्कूलमा यति धेरै उभिए कि उसले आफैंमा बिभिन्न विषयहरूमा पनि पाठ्यक्रमहरू सिकाएको छ।
पहिलो पटक उनले पुस्तक प्रकाशित गरे तर लेखनमा केन्द्रित भएको तीन बर्ष पछि अपराजेसित। यद्यपि यो थाहा छ कि क्यानेरियन स्कूल अफ लिटरेरी क्रिएसनमा उनले अन्य साथीहरूसँग मिलेर नाटकमा कथा लेखेका थिए «र यो सदाका लागि रहनेछ।
२०१ In मा उनले एक्स्ट्रेमादुरा अन्तर्राष्ट्रिय LGBT महोत्सवबाट Krámpack पुरस्कार प्राप्त गरे।
ऊ आफैंले "सरल" को रूपमा आफ्नो लेख्ने तरिका परिभाषित गर्दछ।, तथ्यलाई ध्यान दिएर कि त्यो पाठ प्राप्त गर्न जुन व्यक्तिमा आन्तरिक रूपमा श doubts्का र द्वन्द्व उत्पन्न गर्न पुग्छ कि उसलाई त्यसो गर्न राम्रो प्रशिक्षणको आवश्यकता छ। उनी पनि ती लेखक हुन् जसले लेखनलाई राजनीतिसँग मिसाउँदछन् लेखन "राजनीतिक कलाकृति" हो।
लेखकको रूपमा आफ्नो कामको अतिरिक्त उहाँ स्तम्भकार पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा, उसले द बडिमेन्टे पत्रिकाका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ, डिजिटल अखबार ला गज सामान्यको लागि र लासेक्टा वेबसाइटमा भाग लिन पनि समय छ।
२०१ 2013 मा, जब उनले आफूलाई लेखनको लागि समर्पित गर्ने निर्णय गरे, रोय गालनले एक फेसबुक वेबसाइट बनाई। सामुदायिक प्रबन्धक कोर्स पूरा गर्नु उनको काम हो र उनले यसमा लेख्न थाल्छिन्। केहि चीज जो उसले बन्द गरेन, केवल फेसबुक मा, तर ट्विटर र इन्स्टाग्राममा। र तपाइँले थाहा पाउनुपर्दछ कि उनले लेखेका सबै कुरा हजारौं मानिसहरूले देखीरहेका र साझा गरेका छन्, यसैले ऊ एक प्रभावशाली भएको छ।
रोइ गैलन एक नारीवादीको रूपमा
रोय गालानलाई चिनिनुको अर्को कारण पनि उस्को लागि हो नारीवादी सार्वजनिक बयान, साथै एक नारीवादी सहयोगी। यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि उनले आफ्ना पुस्तकहरूमा नारीवादको बारेमा कुरा गर्छिन्, साथै सामाजिक सञ्जालहरूमा र मिडियामा उनले प्रकाशित गर्ने लेखहरूमा।
वास्तवमा, उनले अन्तर्वार्ताको एक व्यक्ति भएकोले पुरुष समानताका लागि नुरिया कोरोनाडोले लेखेका पुस्तकमा भाग लिए।
रोय गैलनका पुस्तकहरू
आफ्नो साहित्यको पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, रोय गालनसँग बजारमा थुप्रै पुस्तकहरू छन्। तिनीहरू मध्ये पहिलो, अपूरणीय, २०१f मा अल्फागुअारा प्रकाशन गृहको साथ प्रकाशित गरिएको थियो। यद्यपि यो तिनीहरू मध्ये अन्तिम थिएन, तर अझ धेरै छ।
कोमो आफ्नै पुस्तकहरु छ:
तपाई भित्र कोही पनि छैनन्।
यसलाई माया जस्तो नदेऊ।
ती मध्ये धेरै जसो इल्फागुरा पब्लिशिंग हाउससँग लेखिएका छन्, यो प्रेम र लास एलिग्रेस जस्तो नलागेको बाहेक इंक क्लाउड र कन्टेन्टासँग तपाईंले क्रमशः गर्नुभयो। यसबाहेक, तिनीहरू पनि त्यस्तै हुन् जुन उसले उही वर्षमा प्रकाशित गरे किनकि उनी प्रायः प्रत्येक वर्ष एक पटक मात्र नयाँ पुस्तक निकाल्छन्।
आफ्नो लेखकत्व को पुस्तकहरु को अतिरिक्त, उहाँ पनि सहयोगी कार्यहरु मा प्रकाशित भएको छ, ती हुन्:
(h)3ईर्ष्या र दोषलाई प्रेम गर्नुहोस्।
(h) self आत्म-प्रेम।
उनले क्यानरी आइल्याण्ड्स स्कूल अफ लिटरेरी क्रिएसनको साथ प्रकाशन गरेको पुस्तकलाई बिर्सिएन, «र त्यसैले यो सदाका लागि हुनेछ।
अब जब तपाई रोइ ग्यालनलाई थोरै चिन्नुहुन्छ, के तपाई उनका पुस्तकहरूसँग हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » रोय गैलन